Yakatumirwa ne Tranquillus | Jan 6, 2021 | Kunyora uye kunyora unyanzvi hwokukurukura
Semutemo wenguva dzose, mari yakaiswa muchirongwa chako chekuchengetedza vashandi inogona kungoburitswa mushure memakore mashoma mashanu. Zvisinei, mamwe mamiriro ezvinhu inokutendera kuti ubvise zvese kana chikamu chemidziyo yako kutanga. Kuroora, kuzvarwa, kurambana, mhirizhonga mudzimba, kuregera basa, kuremara, kutenga midziyo, kugadzirisa imba huru, chikwereti chakawanda, nezvimwe. Chero chingave chikonzero chako, uchafanirwa kuita chikumbiro chekuburitsa. Tsvaga mune ino chinyorwa ese mapoinzi ekurangarira nezveichi chiitiko.
Ndeipi iwe yaunogona kuvhura yako mushandi kuchengetedza mari?
Zvinoenderana nemitemo iri kushanda, iwe unofanirwa kumirira nguva yepamutemo yemakore mashanu kuti ugone kutora zvinhu zvako. Izvi zvine chekuita neEEE uye kutora muhoro. Izvo zvakare zvinoita kuti ubvise mari yako nekukasira, kana iri PER kana PERCO.
Naizvozvo, kana mamiriro ekukurumidzira achida kuti iwe udaro. Iwe unogona kutanga maitiro ekuvhura mushandi wako kuchengetedza kunyangwe nguva yakatenderanwa isati yasvika. Mune ino kesi, iko kusunungurwa kwekutanga kana kubhadhara kwekutanga. Kune izvi, iwe unofanirwa zvakadaro uve nechikonzero chakaringana. Usazeze kuita imwe ongororo kuti uone kuti ndezvipi zvikonzero zvinoonekwa sezvakakodzera rudzi urwu rwechikumbiro.
Mamwe mazano anoshanda
Chekutanga pane zvese, zvakakosha kuti uone chaizvo nyaya yekuburitswa kwekutanga ine chekuita newe. Zvakare pamwe nehamvuropu yazvinoshanda: PEE, Perco kana mubatanidzwa PER. Ipapo, uchafanirwa kutanga chikumbiro chako chekusunungurwa kwekutanga zvinoenderana nenguva yakatarwa.
Ziva kuti yega yega faira yakanangana. Saka zvakakosha kuti uzvizivise zvakanaka zvisati zvaitika nezve akasiyana mamiriro anoiswa muchibvumirano chako. Usakanganwa kuunza chero chinhu chinoratidza huchokwadi hwechikumbiro chako. Batanidza rimwe kana akawanda magwaro epamutemo mune tsamba yako. Iwe uchaisa ese mikana padivi rako kuti uwane yekutanga kuburitsa chibvumirano. Mamiriro ezvinhu ega ega anoda humbowo chaihwo: chitupa chemuchato, bhuku rekodhi remhuri, gwaro rekusaita, gwaro rerufu, gwaro rekumisa chibvumirano, nezvimwe.
VERENGA Master zvemukati uye fomu mune ako zvinyorwa
Usati watumira chikumbiro chako, ita shuwa kuti utarise mari yaunoda kusunungura. Muchokwadi, iwe hauna kodzero yekukumbira yechipiri kubhadhara nekuda kwechikonzero chimwe chete. Mune ino kesi, iwe unofanirwa kumirira kusvikira homwe yako yawanikwazve.
Tsamba dzekukumbira kuburitswa kwezvirongwa zvekuchengetedza vashandi
Heano maviri emuenzaniso tsamba iwe yaunogona kushandisa kuvhura yako yekubhadhara mari.
Muenzaniso 1 wekukumbira kuburitswa kwekutanga kwezvirongwa zvekuchengetedza vashandi
Nhamba yefaira :
Kodhi yepositi neguta
[Nzvimbo], pa [Zuva]
Netsamba yakanyoreswa ine kubvuma kwekugamuchira
Musoro: Chikumbiro chekutanga kuburitswa kwevashandi mari
Ini ndakaisa hunyanzvi hwangu mukushandira kwekambani yedu kubvira (musi wekutorwa) se (chimiro chenzvimbo yako).
Ini ndinotumira chikumbiro chekukurumidza kusunungurwa kwevashandi vangu mari. Chibvumirano changu chakanyoreswa pasi pezvirevo zvinotevera: zita, nhamba uye mhando yechibvumirano (PEE, PERCO…). Ndinoda kubvisa (chikamu kana zvese) zvefuma yangu, kureva (huwandu).
Muchokwadi (tsanangura muchidimbu chikonzero chechikumbiro chako). Ndiri kukutumira zvakasungirirwa (zita rechiratidzo chako) kutsigira chikumbiro changu.
Kumirira mhinduro yandinotarisira inofadza kubva kwauri, ndokumbira ubvume, Madam, iko kutaura kwekuremekedza kwaziso dzangu.
Muenzaniso 2 wekukumbira kuburitswa kwekutanga kwezvirongwa zvekuchengetedza vashandi
Musoro: Tsamba yekusunungurwa kwekutanga kwevashandi kutora chikamu
Kushanda kubvira (zuva rekuhaya) mukambani yako se (chinzvimbo chakabatwa), ini ndinobatsirwa nehurongwa hwekuchengetedza mushandi hwandinoda kuvhura (zvizere kana zvishoma).
Chokwadi (tsanangura zvikonzero zvinokusunda kuti uendese chikumbiro chako chekusabvisa: muchato, kugadzira bhizinesi, matambudziko ehutano, nezvimwewo). Kuti uratidze chikumbiro changu, ndinokutumira sechibatanidzwa (zita regwaro rinotsigira).
Ndiri kukumbira kuburitswa kwe (huwandu) kubva kune yangu midziyo (usakanganwa kudoma chimiro cheyako hurongwa hwekuchengetedza).
Mune tariro yechibvumirano chinokurumidza pachikamu chako, gamuchira, Changamire, iko kutaura kwekunakisisa kwangu.
Mamwe matipi ekunyora tsamba yekukumbira
Ino ndiyo tsamba yepamutemo inoitirwa kuburitsa chikamu kana vese vashandi vako kutora chikamu muaccount yako account. Zvemukati mutsamba zvinofanirwa kunge zviri chaizvo uye zvakanangana.
VERENGA Nzira yakanakisa yekunyora tsamba yehunyanzvi zvakanaka
Pamusoro pazvose, ita shuwa kuti zvinyorwa zvako zvinotsigira zviri padanho kutarisira mhinduro yakanaka. Ratidza zvakare chinzvimbo chaunobata mukati mekambani uye tsanangura yako mushandi mareferensi kana iwe unayo.
Kamwe tsamba yako yagadzirira. Iwe unogona kuutumira netsamba yakanyoreswa pamwe nekubvuma kwekugamuchira zvakananga kune iyo institution iyo inochengetedza yako mari. Kune mamwe masisitendi, pane unblocking mafomu ekunyorera kuti atorwe kubva papuratifomu yepamhepo muPDF fomati.
Ziva zvakare kuti chako chikumbiro chinofanirwa kuendeswa mukati memwedzi mitanhatu kubva pazuva remutambo unobvumidza kuburitswa.
Iyo muganho wenguva yekuvhura iyo sum
Iwe unofanirwa kuziva kuti kuchinjiswa kwemari yakakumbirwa hakuzoitwe nekukasira. Zvinoenderana nematanho akati wandei, senge mazwi echikumbiro, nguva yekuendesa yetsamba, nezvimwe.
Iyo yekuburitsa nguva zvakare inoenderana nekuwanda kwekukoshesa kwemari mune yako yekuchengetedza hurongwa yakaiswa. Kuverengerwa kweiyo mambure aseti kukosha kwekambani mutual fund kunogona kuitwa nezuva, nevhiki, nemwedzi, nekota kana nesemester. Mune akawanda kesi, iyi frequency ndeyezuva nezuva, izvo zvinoita kuti zvikwanise kuburitsa iyo sum munguva pfupi.
Kana chikumbiro chako chekuvharira changotambirwa, account yako yekubhangi inofanira kupihwa mari mukati memazuva mashanu ekushanda.
Dhawunorodha "Muenzaniso-1-we-an-kutanga-kuburitsa-kukumbira-kune-mushandi-kuchengetedza.docx"	Semuenzaniso-1-ye-an-mberi-kuburitsa- chikumbiro-che--mushandi-kuchengetedza.docx - Yakadzoswa ka2850 - 15 Kb
Dhawunorodha "Muenzaniso-2-we-an-kutanga-kuburitsa-kukumbira-kune-mushandi-kuchengetedza.docx"	Semuenzaniso-2-ye-an-mberi-kuburitsa- chikumbiro-che--mushandi-kuchengetedza.docx - Yakadzoswa ka2782 - 15 Kb
VERENGA Regera pasina ziviso, kodzero yevakadzi vane nhumbu
Tsamba template: svinura mushandi wako kuchengetedza January 8th, 2022Tranquillus
pashureTsika yemhando muExcel 2010
zvinoteveraTsamba template kubvuma kana kuramba chiyero kubva kune chero account